स्थानीय तह र विद्यालयलाई नै चुनौती हो विद्यालय संचालन - सुनाखरी न्युज
Posted on: December 3, 2020 - 2:03 pm
जितेन श्रेष्ठ – बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण बन्द रहेको बिद्यालय संचालनको जिम्मा स्थानिय सरकारलाई दिएसंगै विद्यालय खुल्ने तिथीमिति तोक्न तछाडमछाड देखियो । के स्थानीय तहले यस्को लागि उचित योजनाको पनि तर्जुमा गरेको छ त ? विद्यालय भन्ने बितिकै त्यहाँका शिक्षक,विद्यार्थी, अभिभावक र सिङ्गो समाज जोडिएको हुन्छ ।
त्यसैले, विद्यालय संचालन गर्ने कुरा ठिक हो तर गाइजात्रे पारामा खोल्ने भन्दैमा स्थानिय तहको जिम्मेवारी भने सकिएको छैन । विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या उच्च रहने हुँदा र कोरोना भाइरस सरुवा हुँदा सोचे जति सहज भने पक्कै छैन । अन्य देशहरुको सन्दर्भमा हेर्दा विद्यालय पुन संचालनको अवस्था सामान्य भने पक्कै छैन । विद्यालय संचालन गर्दा कोरोनाको संक्रमण समाजमा झनै वृद्धि भएको आकडा लाउन सकिन्छ । विद्यालय संचालन गर्दा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय जाने कि नजाने भन्ने कुरा भने स्वयंको स्वास्थ्य अवस्थामा,समाजमा कोभिड १९ को संक्रमणको अवस्था, स्थानिय तह, विद्यालयले बालबालिकाहरुलाई सुरक्षीत राख्न अपनाउने सावधानीमा भर पर्ने कुरा हो । बालबालिकाहरु समाजबाट विद्यालय आउँदा, विद्यालयमा रहदा र फेरि समुदायमा जादा भने विशेष सावधानी अपनाउन सकिएन भने भोलिको दुर्घटना निश्चित छ । बालबालिका मात्र नभई विद्यालयमा अन्य शिक्षक, कर्मचारीहरु पनि रहने र उनिहरु उमेर साथै स्वस्थ्य अवस्थाको पनि ख्याल राखिनु पर्छ ।
बिगतमा विभिन्न बैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण अभ्यास गरिएको थियो । तर अहिलेको समयमा स्थानिय तहको निर्णयमा विद्यालय पुर्ण,आंशिक रुपमा संचालन हुन लागेको छ । यसो हुनुभन्दा पुर्व नै जोखिम न्यूनीकरण, जनचेतनाका साथै शिक्षक,विद्यार्थी, कर्मचारी, अभिभावक सबैको स्वास्थ्य अवस्था बारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिनु पर्ने थियो । शिक्षण संस्थाहरुले सबै सुरक्षाका मापदण्ड ब्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि अध्यन हुनु पर्ने थियो । स्थानिय तहबाट स्वास्थ्य सम्बन्धि सुबिधाका ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि हुनु पर्ने थियो । समाजमा कोभिड १९ को अवस्थाको बारेमा पनि अध्यन गर्नु पर्ने थियो । तर यसो गरेको छैन । जसको फलस्वरूप समाजमा कोभिड १९ आक्रमक रुपमा समाजमा फैलने पुर्व अनुमान भने पक्कै लगाउन सकिन्छ । झन्डै शैक्षिक सत्रको आधा भन्दा बढी समय शैक्षिक क्रियाकलापहरु समयमा चुस्त रुपमा संचालन नहुदा सरोकार सबैमा दीर्घ असर परेको कुरा तितो सत्य हो । विद्यालय संचालन हुँदा विद्यार्थीहरुको शारीरिक,मानसिक साथै सम्बेगात्मक पक्षको बिकास सङै शैक्षिक स्तरको पनि बिकास हुने कुरा पनि निश्चित नै छ । तर सैद्धान्तिक कुरा मात्र गरेर रोगको जोखिमबाट मुख मोड्न भन्ने मिल्दैन । यदि विद्यालय संचालन नै गर्ने हो भने स्थानीय तहले धेरै कुराहरुको लेखाजोखा गर्नु अपरिहार्य छ ।
स्थानिय तहले प्रारम्भिक अध्यन अनुसन्धान गर्न पर्ने हो तर पनि मुख दर्शक भएर बसेको छ । शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुने सबैको स्वस्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत साधनको ब्यवस्था गरिनु पर्ने हो । तर समुदायमा नै कोभिड १९ को जोखिम बढी रहदा त मौन बसेको स्थानिय सरकार, विद्यालय संचालनमा जागरुक हुन्छ भन्ने आशा राख्नु पुर्ण मुर्खता हो । विद्यालय संचालनको प्रत्यक्ष भुमिका विद्यालको पनि हुन्छ । विभिन्न उमेर समुहका बालबालिका हुने हुँदा कोभिड १९ सम्बन्धि चेतनावृद्धि गर्दै सुरक्षित राख्नु ठूलो चुनैती हुन्छ । हजारौंको संख्यामा रहेको विद्यार्थीहरु बिच सामाजिक दुरि कायम राख्न निकै हम्मे हम्मे छ । विद्यालयमा आवश्यक स्रोत र साधन पर्याप्त मात्र नहुदा पनि भोलिका दिन निकै भयावह छ । समाजमा नै बालबालिका असुरक्षित भएका कारण विद्यालय शिक्षण सिकाइको क्रममा विद्यालय नै उच्च जोखिमको केन्द्र हुन पनि सक्छ । १ मिटरको भैतिक दुरि, माक्सको प्रयोग, हात धुनका लागि पर्याप्त मात्रामा साबुन पानी, सेनिटाइजर,कक्षाकोठा सेनिटाइज, सफा पिउने पानी, विशेष औषधि उपचारको सुबिधा, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको दैनिक स्वास्थ्य अवस्थाको मापन साथै अभिलेख, कक्षाकोठा भन्दा बाहिरको बाताबरणमा जोखिम न्यूनीकरण, अभिभावकहरुसङ्ग निरन्तर सम्पर्क जस्ता साधारण पक्षको विद्यालयले ब्यवस्थापन गर्न सक्छ ? नसकेमा स्थानीय तहले ब्यवस्थापन गर्दिन सक्छ ?
कुनै पनि समस्या आइपरेमा जोखिम ब्यवस्थापनको लागि निति निर्माण भएको छ ? जोखिम बढेमा त्यसको सामना गर्ने सामर्थ्य विद्यालय र स्थानिय तहमा छ ? स्थानीय तहको भुमिका अनुकरणीय नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कति छ ? के विद्यलयले सम्पुर्ण आधारहरुको उचित ब्यवस्थापन गरेको छ ? अभिभावकहरुले बालबालिकाहरुलाइ समाजमा सुरक्षित नै राखेका छन त? थप सुरक्षित राख्न कस्तो भुमिका रहन्छ ? तसर्थ, विद्यालय संचालन गर्ने भनिरहदा अनेकौं प्रश्नहरु जन्मिन्छ्न । ती प्रश्नको उतर स्थानिय तह र विद्यालयसङ्ग हुनु पर्छ । अनि मात्र यस्तो कोभिडको जोखिममा विद्यालय संचालन गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।